'प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपियो' : डा. हरिवंश झा - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपियो’ : डा. हरिवंश झा
Posted by Milap Subedi | २६ चैत्र २०७४, सोमबार ०९:४७ |
डा. हरिवंश झा, नेपाल–भारत मामिला विज्ञ
यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाँदा संयुक्त वक्तव्य आउन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा गएपछि दुवै देशको तर्फबाट १२ बुँदै सम्झौता जारी भएको छ । यो सँगै महत्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल भएको बुझिएको छ । चाँडै परिणाम आउने त्यस्तो कुनै सम्झौता भएन । प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सन्दर्भमा रहेर राज ढुंगानाले नेपाल भारत मामिलाका जानकार तथा अर्थशास्त्री डा. हरिवंश झासँग गरेको कुराकानी–
० प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले जुन हिसाबले स्वागत गर्यो त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धमा परिवर्तन आएको हो भन्न सकिन्छ ?
– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले स्वागत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि स्वागत गर्नुभयो । त्यत्ति मात्र होइन, सम्पूर्ण भारतले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागत गरेको छ । यो स्वागत प्रधानमन्त्री ओलीलाई होइन, नेपाली जनतालाई स्वागत गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि पनि स्वागत गरेको हो, अहिले पनि स्वागत भयो । अहिले प्रधानमन्त्री ओली बलियो प्रधानमन्त्रीका रुपमा हुनुहुन्छ । नेपालसँग कुनै सम्झौता भयो भने त्यो कार्यान्वयन होला भन्ने भारतलाई लागेको छ । नेपालप्रति भारतको सोचाइमा नयाँ आयाम थपिएको छ ।
० भारतीय राष्ट्रपतिले नेपालसँगको सम्बन्धबारे गरेको टिप्पर्णीलाई कसरी लिन सकिन्छ ?
– भारतको जति पनि अन्य देशसँग सम्बन्ध छ, त्यसमध्ये नेपालको विशिष्ट स्थान छ । प्रकृतिले पनि नेपाललाई भारतसँगको सम्बन्धलाई अन्योन्यश्रित बनाएको छ । नेपालको भारतसँग जति गहनतम सम्बन्ध हुनसक्छ, अरु राष्ट्रसँग हुन सक्दैन । त्यसकारण कारण भौगोलिक हो । नेपाल तीनतिरबाट भारतले घेरेको छ । हाम्रो संस्कृति र भाषा भारतसँग मिल्छ । हाम्रो आवातजावत भारतसँगै बढी हुन्छ । यस हिसाबले भारतीय राष्ट्रपतिले नेपाल भारतसँगको सम्बन्धबारे जुन टिप्पणी गर्नुभएको छ, त्यो अदितीय छ । यो अदितीय सम्बन्ध हाम्रो तर्फबाट पनि हो ।
० यो भ्रमणमा लिने दिने केही भयो ?
– लिने दिने केही भयो । वीरगन्जमा एकीकृत भन्सार जाँचको उद्घाटन भयो । यसको निर्माण केही समय अघि नै भएको थियो । गत शनिबार औपचारिक उद्घाटन भयो । यसले नेपाल भारतको व्यापारमा परिवर्तन आउन सक्छ । नेपाली व्यापारीहरुले सामान आपूर्ति गर्न जुन कठिनाइ पाइरहेका थिए, अब केही सहज हुन्छ । व्यापारमा लिने–दिने दुवैतिरबाट भएको छ । अर्को मोतिहारीबाट अम्लेखगन्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तार हो । भारतको भुमिबाट नेपालतर्फ सजिलै पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुन्छ । यसले पनि दुवै देश लाभान्वित हुन्छन् । १२ बुँदे सम्झौतामा रेल सेवा विस्तारेबारे पनि कुरा छ । रक्सौलबाट काठमाडौं रेल सेवामा सम्झौता भइसकेको छ । नेपाललाई जलमार्ग पनि जोड्ने कुरा भएको छ । अर्थात् दुवै देशले लिने दिने गरी सम्झौता गरेका छन् ।
० अरुण र पञ्चेश्वरका बारेमा केही बोलिएन ?
– अरुण र पञ्चेश्वरको कुरा पनि नेपालले उठेको हुनुपर्छ । यसमा नेपाल र भारत दुवैको चासो छ । सबै कुरा एउटै भ्रमणमा हुन्छ भन्ने हुँदैन । निकट भविष्यमा भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्ने हामीले बुझेका छौं । त्यो भ्रमणले यी महत्वपूर्ण दुई आयोजना जुन समृद्धिसँग जोडिएको त्यो सम्बोधन हुन्छ होला । सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन त्यो योजना महत्वपूर्ण छ । अहिले नै योजना सम्बोधन हुनुपथ्र्यो, तर भएन । अब निकट भविष्यमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशा छ ।
Previousअनुदान र राजस्व बाँडफाँट सिलिङ : प्रदेशलाई १५ अर्ब, स्थानीय तहलाई सवा अर्ब
Nextनयाँ आईजीपीको दौड तीव्र
नेसनलको सम्बन्धन खारेज गर्न डा केसीको माग, अटेर गरे फेरी अनसन बस्ने !
४ भाद्र २०७४, आईतवार १८:०७
विश्वकप फुटबल फाईनल: पहिलो हाफमा फ्रान्स क्रोएशियासँग २-१ ले अघि
३१ असार २०७५, आईतवार २१:३९
शीतलहरको कहर : सिरहामा मृत्यु हुनेको संख्या १४ पुग्यो
१ माघ २०७४, सोमबार १७:४३
विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रदूषण हुने देशमा नेपाल छैठौं स्थानमा
३ कार्तिक २०७४, शुक्रबार ०९:०८